ရုရှားသဒ္ဒါ Common coordinating conjunctions include:
ရုရှားသဒ္ဒါ Complementizers (subordinating conjunctions, adverbs, or adverbial phrases) include:
တာလီမြို့ Local transport modes include buses (11 routes in the city proper), taxis, bicycles, and boat (on the Erhai Lake).
ရှိန်းကျိန့်မြို့ The Special Economic Zone (SEZ) comprised only Luohu, Futian, Nanshan, and Yantian districts until 1 July 2010, when the SEZ was expanded to include all districts,afivefold increase over its pre-expansion size.
ဆိုယုဇ်အာကာသယာဉ် Soyuz ACTS (Advanced Crew Transportation System), also known as Soyuz-K, isaproposed version of the Soyuz design capable of achieving lunar orbit. The upgrades could includeanew habitation module developed by the European Space Agency. A novel, rocket-based precision landing system may also be implemented. Missions could be launched from Baikonur or Guiana Space Centre.
ဂရန်ဂျား၊ ဖာလီ ဇာတ်ဝင်ခန်းအနည်းအကျဉ်း စတင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းမှစ၍ ရုပ်ရှင်လောကသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် The Purple Heart ဇာတ်ကားတွင် စတင်၍ အရေးကြီးသော ကဏ္ဍမှပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၎င်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဇာတ်ကားအချို့မှာ Strangers onaTrain, Rope, Enchantment Full House,Senso တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ကျော်ကြားသော ပြဇာတ်ဖြစ်သည့် Deathtrap တွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် The Carefree Tree ပြဇာတ်တွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏Include Me Out: My Life From Goldwyn to Broadway အမည်ရှိသော ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရေးသားခဲ့သည်။ ဖာလီဂရန်ဂျားသည် မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် နယူးယောက်မြို့၌ အသက် ၈၆ နှစ်တွင် ကွယ်လွန်သည်။
နှစ်လုံးတွဲ ကြယ် Visual doubles are also designated by an abbreviation for the name of their discoverer followed byacatalogue number unique to that observer. For example, the pair α Centauri AB was discovered by Father Richaud in 1689, and so is designated "RHD 1". Other examples include Δ65, the 65th double discovered by James Dunlop, and Σ2451, discovered by F. G. W. Struve.